Khuraafaadkii Apollo | Safarka Absolut
Mid ka mid ah khuraafaadka ugu muhiimsan ee dunida soo jireenka ahi waxay ahayd tii Apollo, oo la macaamili jirtay ilaah dagaalyahan oo farshaxan isku mar ahaa maxaa yeelay waxaa la socon jiray muusigga wuxuuna aad u difaaci jiray gabayada iyo miyuusigga. Waa mid ka mid ah ilaahyada aadka loo qaddariyo ee Giriiggii hore iyo mid ka mid ah kuwa ugu badan.
Haddii aad jeceshahay khuraafaadka Giriigga, ma seegi kartid boostada soo socota halkaasoo aan wax ka weydiin doonno tirada Phoebus (sida ay Roomaanku u yaqaaneen ilaahyadan), muhiimada quraafaadkii Apollo, asalkiisa, shaqadiisa iyo qoyskiisa, iyo arrimo kale.
1 Kuma ayuu ahaa Apollo?
2 Sidee Apollo wakiil uga yahay?
3 Maxay yihiin hadiyadaha ilaaha Apollo?
3.1 Apollo iyo clairvoyance
3.2 Apollo iyo hadalkii
3.3 Apollo iyo Dagaalkii Trojan
4 Qoyska Apollo
Kuma ayuu ahaa Apollo?
Sida ku cad quraafaadka Giriigga Apollo waxaa dhalay Zeus, ilaaha ugu awoodda badan Olympus, iyo Leto, gabadh titan ah oo loo caabudi jiray ilaahadda habeenka iyo dharaarta midba midka kale.
Zeus wuxuu markii hore xiiseynayay Asteria, oo ahayd Leto walaashiis, wuxuuna isku dayay inuu xoog ku qabsado. Si kastaba ha noqotee, waxay ku guuleysatay inay baxsato oo isu rogtay digaagduur laakiin ilaahnimadan oo sii waday dhibaatadeeda, ayay aakhirkii isku tuurtay badda oo noqotay jasiiradda Ortigia.
Ma uusan gaarin hadafkiisa, Zeus wuxuu markaa indhaha saaray indhaha Leto oo aargudasho sameeyay xiriirkaasna wuxuu uur ku yeeshay Apollo iyo mataankiisa Artemis. Si kastaba ha noqotee, xaaska sharciga ah ee Zeus, Hera, markay ogaatay halganka ninkeeda, waxay bilowday cadaadis aad u xun oo ka dhan ah Leto illaa ay gaadhay inay caawimaad ka raadiso gabadheeda Eileithyia, ilaahadda dhalashada, si looga hortago dhalashada titanid.
Sababtaas awgeed ayaa ah sida ku cad quraafaadka, Leto wuxuu ku jiray fooshii foosha foosha xumeyd sagaal maalmood laakiin mahadcelinta faragelinta ilaahyada u naxariistay Leto, dhalashadii Artemis ayaa loo ogolaaday waxayna si dhakhso leh qaangaar ugu noqotay hooyadeed. iyadoo ay la socoto keenista walaalkeed Apollo. Oo sidii bay u dhacday. Si kastaba ha noqotee, Artemis aad ayey ula dhacday silica hooyadeed waxayna go'aansatay inay waligeed bikro ahaato.
Laakiin dhacdadu intaas kuma joogsan. Ma aysan gaarin hadafkeedii, Hera waxay mar kale isku dayday inay ka takhalusto Leto iyo carruurtiisa iyada oo u dirtay feer si ay u disho. Mar labaad, ilaahyadu waxay u naxariisteen qaddarka Leto waxayna ka dhigeen Apollo inuu ku koro afar maalmood gudahood si uu ugu dilo bahalka kun fallaadhood.
Maadaama abeesadu ay ahayd xayawaan rabaani ah, Apollo wuxuu ku qasbay inuu sameeyo ciqaab dilkiisa ah iyo meeshii uu Python ku dhacay, Oracle of Delphi ayaa laga taagay. Wiilka Zeus wuxuu noqday mas'uulka meeshan, si uu hadhow ugu faalleeyo saadaasha dhagaha kuwa faaliyaha ama pythias.
Laakiin cadaawada Hera iyo Leto kuma ekaan halkan laakiin quraafaadkii Apollo wuxuu la xiriiray in Artemis iyo inuu ku qasban yahay inuu waligiis ilaaliyo hooyadood, maadaama Hera aysan waligeed ka joogsan jirdilkeeda. Tusaale ahaan, sida ku cad quraafaadka Giriigga, mataanuhu waxay dileen 14-kii wiil ee Niobe, kuwaasoo ku maadeystay titan aan dhib lahayn, iyo Titius weyn oo doonayay inuu xoog ku muquuniyo.
Sidee Apollo wakiil uga yahay?
Wuxuu ka baqay ilaahyada kale waalidkiis oo keliya ayaa xakameyn kara. Waxaa loo matalay inuu yahay nin dhalinyaro ah oo qurxoon, gadh la'aana madaxiisa lagu qurxiyay ubax laurel ah gacmihiisana uu ku haysto jaan iyo cirib uu Hermes siiyay. iyadoo raaligelin laga bixinayo xatooyada qayb ka mid ah lo'da Apollo. Markii uu bilaabay inuu garaaco aaladda, ina Zeus wuxuu la yaabay inuu yahay qof aad u jecel muusikada waxayna noqdeen saaxiibo waaweyn.
Apollo sidoo kale wuxuu matalayaa fuushan gaadhifaraska dahabiga ah ee Qorraxda oo afar fardood oo qaali ah ay jiidayeen si ay cirka uga gudbaan. Sababtaas awgeed, waxaa sidoo kale loo tixgeliyaa inuu yahay ilaah nuurka, Helios oo ah ilaaha Qorraxda. Si kastaba ha noqotee, xilliyada qaar taariikhi ah labada ilaahba waxaa lagu aqoonsaday hal, Apollo.
Maxay yihiin hadiyadaha ilaaha Apollo?
Apollo waxaa badanaa lagu tilmaamaa inuu yahay ilaaha farshaxanka, muusikada, iyo gabayada.
Sidoo kale isboortiga, qaansooyinka iyo fallaaraha.
Isagu waa ilaaha dhimashada lama filaanka ah, cudurrada iyo aafooyinka laakiin sidoo kale waa ilaaha bogsiinta iyo kahortagga xoogagga sharka.
Apollo waxaa lagu aqoonsaday iftiinka runta, sababta, kaamilnimada iyo wada noolaanshaha.
Isagu waa ilaaliyaha adhijirrada iyo adhiga, badmaaxiinta iyo qaansoleyda.
Apollo iyo clairvoyance
Marka loo eego khuraafaadka Apollo, ilaahani wuxuu lahaa awood uu ugu gudbiyo hadiyadaha cadeynta dadka kale arintaasina waxay ku dhacday Cassandra, wadaadkiisa iyo gabadha uu dhalay Priam King ee Troy, oo isagu siiyay hadiyada wax sii sheegida isagoo ku badalay a kulan jidh ahaaneed. Si kastaba ha noqotee, markii ay aqbashay kuliyadan, gabadha yari waxay diidday jacaylka ilaahay isaguna, isagoo dareemay jilib, wuu habaaray, taas oo u horseedday cidna weligeed rumayn doonin saadaasheeda.
Taasi waa sababta markii Cassandra ay rabtay inay uga digto dhicitaanka Troy, saadaasheeda si dhab ah looma qaadan magaaladana waa la burburiyay.
Apollo iyo hadalkii
Marka loo eego quraafaadka caadiga ah, Apollo wuxuu sidoo kale lahaa hadiyado waxsheega, oo dadka u muujiya aayaha aayaha iyo hadalkiisii ​​Delphi (meeshii uu ku dilay maskii Python) wuxuu muhiimad weyn u lahaa Griiga oo dhan. Oracle of Delphi wuxuu ku yaalay xarun diimeed oo ku taal cagaha Mount Parnassus Griiguna waxay aadeen macbudka ilaaha Apollo si ay wax uga bartaan mustaqbalkiisa afka Pythia, oo ah wadaad si toos ah ula xiriirta ilaahkan.
Apollo iyo Dagaalkii Trojan
Quraafaadkii Apollo wuxuu sheegayaa in Poseidon, oo ah ilaaha badaha, uu u soo diray inuu ka dhiso derbiyada hareeraha magaalada Troy si looga ilaaliyo cadaawayaasha. Markii boqorkii Troy uusan doonaynin inuu bixiyo nimcada ilaahyada, Apollo wuu aargoostay isagoo aafo ba'an u diray magaalada.
Markii dambe, Apollo wuxuu soo farageliyay Dagaalkii Trojan in kasta oo xaqiiqda ah in markii ugu horreysay Zeus uu ilaahyada weydiistay dhexdhexaadnimo khilaafka. Si kastaba ha noqotee, waxay ku dhammaadeen ka-qaybgalkeedii. Tusaale ahaan, Apollo iyo Aphrodite waxay ku qanciyeen Ares inuu u dagaallamo dhinaca Trojan maadaama laba ka mid ah wiilasha Apollo, Hector iyo Troilus, ay ka mid ahaayeen dhinaca Trojan.
Sidoo kale, Apollo wuxuu ka caawiyay Paris inay disho Achilles, isagoo ahaa kii ku jiheeyey fallaaraha amiirka Trojan barta kaliya ee daciifka ah ee geesiga Griigga: ciribtiisa. Wuxuu sidoo kale badbaadiyey Aeneas dhimashadii Diomedes.
Apollo wuxuu lahaa lamaanayaal badan, kuwa badan iyo caruur. Isaga oo ah ilaaha quruxda wuxuu lahaa lab iyo dhedig jacayl.
Ragga jecel waxay ahaayeen:
Dhinaca kale, wuxuu lahaa dumar badan oo wada-hawlgalayaal ah oo uu isagu carruur ka dhalay.
Iyadoo Muse Talia uu lahaa Coribantes
Aniga iyo Dríope ilaa Anfiso
Keresaan wuxuu dhalay Ion
Isagoo haysta Qof walba wuxuu haystay Miletus
Iyadoo Coronis u socota Asclepius
Nymph Kirene wuxuu dhalay Areisteo
Ftía iyada ayey uuraysatay Doro
Qione wuxuu lahaa Filamón
Isaga oo leh Psámate wuxuu dhalay Lino
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Khuraafaadkii Apollo